Templelọ ndị mmadụ - WRSP
Ụlọ ndị mmadụ
NDEOMỌDEO EOLỌ EMLỌ TLỌ
1931 (May 13): James (Jim) Warren Jones mụrụ na Crete, Indiana.
1949 (June 12): Marceline Mae Baldwin lụrụ James (Jim) Warren Jones.
1954: Jim na Marceline Jones hiwere Community Unity Church na Indianapolis, Indiana.
1956: Templelọ ndị mmadụ, aha a na-akpọ Wings of Deliverance (nke mbụ edebara aha na 1955), mepere na Indianapolis.
1960: Templelọ ndị mmadụ wee bụrụ onye òtù nke òtù Ndị Na-eso ofzọ nke Kraịst (Chọọchị Ndị Kraịst).
1962: Jim Jones na ezinụlọ biri na Brazil.
1965 (July): Jones, ezinụlọ ya, na ndị òtù 140 nke ọgbakọ agbụrụ ya kwagara Redwood Valley, California.
1972: Templelọ ndị mmadụ zụrụ ụlọ ụka na Los Angeles (Septemba) na San Francisco (Disemba).
1974 (Oge Ezumike): Ndị ọsụ ụzọ Templelọ Nzukọ Peopleslọ Peoples malitere ịsacha ala na Northwest District nke Guyana, South America iji mepụta Templelọ Ọrụ Ugbo nke Peoples.
1975 (Disemba): Al na Jeannie Mills, ndị si n'ezi ofufe dapụ nke Peopleslọ Nsọ, hiwere Freedomlọ Ọrụ Nnwere Onwe.
1976 (February): Templelọ ndị mmadụ bịanyere aka na gọọmentị nke Guyana ka ha wee nweta ụlọ ọrụ maka “ịzụlite ma rite uru n'ụzọ dịkarịa ala otu ụzọ n'ụzọ ise" nke 3,852 acres dị na Northwest District nke Guyana.
1977 (Oge Ezumike): Ihe dị ka ndị otu puku mmadụ na-anọ n'ụlọ nsọ kwagara Jonestown n'ime ọnwa atọ.
1977 (Ọgọstụ): New Magazine Magazine bipụtara akwụkwọ ngosi nke ndụ n'ime Templelọ Nzukọ Ndị Mmadụ dabere na akụkọ ndị si n'ezi ofufe dapụ.
1977 (Oge Ezumike): Tim Stoen guzobere "Ndị ikwu nwere nchegbu," otu ndị na-eme ihe n'eziokwu nke ndị si n'ezi ofufe dapụ na ndị òtù ezinụlọ gbara ndị ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ume ka ha nyochaa Templelọ Nzukọ Ndị Mmadụ.
1977 (Septemba): "nnọchibido ụbọchị isii" nke Jim Jones guzobere na Jonestown nke ndị bi na ya kwenyere na ha na-awakpo ha.
1978 (November 17): California Congressman Leo J. Ryan, ndị otu metụtara ndị ikwu, na ndị otu mgbasa ozi gara Jonestown.
1978 (November 18): Ryan, ndị nta akụkọ atọ (Robert Brown, Don Harris, na Greg Robinson) na otu onye otu ụlọ nzukọ Peoples (Patricia Parks) bụ ndị e gburu n'ọgba egbe na ọdụ ụgbọ mmiri Port Kaituma, kilomita isii site na Jonestown. Mgbe mwakpo ahụ na ọdụ ụgbọ elu ahụ karịrị ndị bi na 900, na-agbaso iwu nke Jones, tinye nsi na Jonestown pavilion. Jones nwụrụ site na mgbọ egbe ya n'isi.
1979 (Machị): Kọmitii Enyemaka Mberede nke Guyana nwetara ego iji bufee ihe karịrị ndị ozu 400 achọpụtabeghị na ndị ekwupụtabeghị na Dover, Delaware ka a ga-etinye ha na ebe a na-eli ozu Evergreen na Oakland, California. E wuru obere ihe ncheta.
2011 (May 29): Ọrụ nraranye mere mgbe ị na-ahụ nwụnye ihe ncheta anọ na ebe a na-eli ozu Evergreen na-edepụta aha ndị niile nwụrụ na Jonestown.
2018 (November 18): Ememe ncheta gosipụtara mmezigharị nke ebe ili ozu, tinyere ntinye nke obere ihe ncheta nke na-ahụ ntinye 2011.
James Warren Jones [Foto dị n'aka nri] ka a mụrụ na May 13, 1931 nye ezinụlọ na-arụ ọrụ na elu nke Oké Ndakpọ Akụ na Crete, Indiana (Halllọ Nzukọ 1987: 4). Nna ya, James Thurman Jones, bụ onye agha nwere nkwarụ, ebe nne ya, Lynetta Putnam Jones, bụ onye isi na-elekọta ezinụlọ na onye nne na nna na-elekọta ezinụlọ. O kpaliri mmasị nwa ya nwoke na ikpe ziri ezi na nha anya. O nwere obi abụọ banyere okpukpe a haziri ahazi, mana o kwenyere na mmụọ - nkwenkwe ọ gwara nwa ya nwoke (Hall 1987: 6). Onye agbata obi ya kpọgara ya na chọọchị Pentikọstal dịka nwatakịrị, nke a doro anya na nke a mere ka nghọta ya banyere ofufe dị ka ahụmahụ miri emi. Ihe sitere na mmetụta ndị a bụ nkà mmụta okpukpe nke ejiri aka ya jikọta akụkụ nke Pentikọstal na ọdịmma ọha na eze. Jones zutere Marceline Baldwin na Richmond, Indiana, na Jones dị afọ 18 lụrụ 22 afọ na June 12, 1949. Di na nwunye ahụ kwagara Indianapolis na 1951 ịga ụlọ akwụkwọ.
Site na 1954, Jones guzobere ụka nke aka ya, nke akpọrọ Community Unity, na Indianapolis (Moore 2009: 12). N'afọ ahụ, ọ kwusara ozi dị ka onye ọbịa na Laurel Street Tabernacle na Indianapolis, Indiana, Nzukọ nke Chineke dị na ọdịnala Pentikọstal (Halllọ Nzukọ 1987: 42). Ọ bụ ezie na ndị isi chọọchị ahụ kwara arịrị na 'nsonye nke ndị Africa America na Community Unity Church ya, ụdị ọmarịcha ya masịrị ọtụtụ ndị ọrụ klas na-arụ ọrụ na ọgbakọ Laurel Street. Jim na Marceline depụtara nku nke nnapụta n’April 4, 1955; otu afọ ka e mesịrị, ha debanyere aha ọzọ, kwaga, ma degharịa aha ha nzukọ Peoples Temple (Halllọ Nzukọ 1987: 43). Ka ọ na-erule afọ 1957, Templelọ Nzukọ Apostolic nke Templelọ Nsọ nwetara aha na Indianapolis maka ịme ozi ozioma ọha mmadụ. Ọgbakọ tozuru oke na 1959 ka Mgbakwunye na Ndị Na-eso ofzọ nke Kraịst (Christian Church), na 1960 na Peoples Temple Christian Church Full Gospel [Image na nri] ghọrọ onye ọrụ gọọmentị nke ụka (Moore 2009: 13).
N'ime oge 1950, Jim na Marceline gara leta Nna Chineke Peace Mission na Filadelfia. Jones hụrụ ọhụụ agbụrụ nke Nna ya, ikike ya na-adọrọ adọrọ, yana ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma. Ọ nabatakwara omume Chineke nke ime ka ndị ụka kpọọ ya “Nna,” kpọọkwa Marceline “Nne”. Mgbe Nna Divine nwụsịrị, Jones nwara iweghara Peace Mission, mana Mama Divine jụrụ ọganihu ya. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị agadi nọ n'Africa nọ na-enwe mmasị na ozi nke Templelọ Nsọ ma kwaga n'ebe ọdịda anyanwụ (Moore 2009: 16-17).
Nkwekorita Jones na ịha nhatanha agbụrụ duuru ya ruo nwa oge ka ọ bụrụ onye isi oche nke Indianapolis Human Rights Commission na 1961. Mana ọhụụ nke mbibi nuklia, yana isiokwu dị na mbipụta nke Jenụwarị 1962 nke Magazin Esquire na-achọpụta ebe ndị kasị dịrị nchebe ma ọ bụrụ na agha nuklia, kpaliri ya ịkpọrọ ezinụlọ ya gaa Belo Horizonte, Brazil, otu n'ime ebe ndị edepụtara. Templelọ nsọ ahụ gara n'ihu na Indianapolis na-enweghị Jones, mana ọ dara ada n'enweghị onye ndu ya. Mgbe ọ laghachiri na 1965, o mere ka ihe dị ka mmadụ 140, ọkara n'ime ha bụ ndị Africa America na ọkara ndị Caucasians, ịkwaga na ndagwurugwu Redwood dị na obodo mmanya California, ebe ọzọ dị mma amatara Esquire (Halllọ Nzukọ 1987: 62). N'ebe ahụ, ha wuru ụlọ ụka ọhụrụ na ọtụtụ ọfịs nchịkwa, wee malite ịrụ ọtụtụ ụlọ nlekọta maka ndị agadi na ndị ntorobịa nwere nsogbu.
Ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu na California bụ ihe ọzọ mere Jones ji kwaga ọdịda anyanwụ (Harris na Waterman 2004). Na Redwood Valley Jones malitere ịkpọbata ndị na-eto eto, ndị gụrụ akwụkwọ na kọleji iji mejuo ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ezinụlọ na-arụ ọrụ bụ ndị nwebu ndị Peoples Temple. Kaadị a nke ndị otu ọgaranya bara ụba-nke ọtụtụ n'ime ha mepụtara mkpebi maka udo na ikpe ziri ezi dịka akụkụ nke ngagharị nke ikike ruuru mmadụ na ọgụ mgbochi Vietnam-nyere ndị otu aka dara ogbenye aka na ịgagharị usoro ọdịmma mmadụ. Ha nyere ọtụtụ ọrụ nyere ndị ogbenye aka inweta elele ndị ruuru ha, tụmadị ndị agadi nọ na nsogbu na ịnakọta ụgwọ Social Security ha ritere. Mgbe Templelọ Nsọ ahụ mepere ụka na Fillmore District nke San Francisco, ọ dọtara ọtụtụ puku ndị Africa America yana ndị isi obodo na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'etiti ghetto, otu a nyere nnwale ọbara mgbali n'efu maka ndị agadi, nnwale ọrịa sickle cell n'efu maka ndị Africa America, yana nlekọta ụmụaka n'efu maka ndị nne na nna na-arụ ọrụ. O dokwara ọtụtụ ndị na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu, site na Angela Davis ruo Dennis Banks.
Ọtụtụ narị ndị otu ụlọ-nsọ ​​biri n’ogbe na Redwood Valley, San Francisco, na, na obere, na Los Angeles. Ndị otu agadi bịanyere aka na nkwekọrịta ndụ, na-enye ego maka nchekwa ha maka nchekwa ụlọ na ụlọ, nlekọta ahụike, na ngwongwo na ọrụ dị mkpa maka ezumike nká ha. Na ndagwurugwu Redwood, ndị otu ụlọ nsọ hibere ma rụọ ọtụtụ ụlọ nlekọta maka ndị agadi, ndị isi mgbaka, na ndị nwere nsogbu uche, na ụlọ ọrụ ndị a welitere ego maka otu ahụ. Ndị ahụ "metụtara ọha na eze," dị ka ndị otu ụlọ nsọ si kọwaa ya, nyeere ndị otu ahụ ego ego ha wee nata obere nkwado ndụ: ụlọ mkpagide, obere ego maka ihe ndị dị mkpa, nri ọnụ. Arịrịọ onyinye ego nke ọdịnala site na izipu ọtụtụ mmadụ kwadoro ụfọdụ mmemme mmekọrịta nke Templelọ Nsọ (Levi 1982: xii). Otu Planninglọ Ọrụ Na-eme Atụmatụ, nke ihe dị ka 100 ndị isi ụlọ nsọ, tụlere mkpebi ndị bụ isi gbasara nzukọ, yana Jones na-ejigide ikike ime mkpebi ikpeazụ.
Na 1974, ndị ndu nke Templelọ Nsọ na ndị Guyana South America gbara izu iji mepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4,000 acres na Northwest District nke mba ahụ na Ókèala Venezuelan. Ka ọ na-erule oge ụlọ nsọ ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta ụlọ maka ala ahụ na 1976, ndị ọsụ ụzọ si na otu a ejirila afọ abụọ nke ọrụ nkwụsị ọrụ [Image na nri] iji kpochapụ oke ọhịa na Guyana iji guzobe ihe ha kpọrọ Peoples Temple Agricultural. Oru ngo. Guyana, steeti nwere ọtụtụ agbụrụ na naanị mba na-asụ Bekee na South America, kwupụtara na ya bụ mba jikọrọ ọha na eze. Ndị ọchịchị ojii pere mpe ya nabatara atụmanya nke ịbụ ebe mgbaba maka ndị America na-agba ọsọ n'etiti ọha mmadụ na-emekpa ahụ na mmegbu. Ọzọkwa, inwe nnukwu ìgwè nke ndị nna ochie ochie nke America nke dị nso na ókèala ya na Venezuela mere ka obi sie anyị ike na US nwere mmasị na mpaghara ahụ esemokwu (Moore 2009: 42). Peopleslọ ọrụ ndị ọrụ ugbo nke ndị mmadụ toro nwayọ na mbụ, na-ebi naanị ihe dịka mmadụ iri ise dịka ọnwa mbụ nke 50, mana ọ gbasaa karịa ndị bi na 1977 site na Eprel, yana 400 site na njedebe nke afọ (Moore 1,000: 2009) .
Nrụgide dị iche iche dugara ngwa ngwa mbata na California na Guyana. Otu mkpali bụ nyocha US Internal Revenue Service na-enyocha ego metụtara azụmahịa nke Templelọ Nsọ. Nke a yiri ọnọdụ enweghị ụtụ isi nke ụka ahụ, ma bulie ikike nke mechie nzukọ (Hall 1987: 197-98). Ebumnuche ọzọ sitere na mmemme nke otu ndị otu esemokwu na ndị ikwu nke ndị otu ugbu a. Ndị otu a maara dịka ndị ikwu metụtara, gbasoro ụlọ ọrụ gọọmentị dị iche iche ka ha nyochaa ụlọ nsọ ahụ, na-ebo ha ọtụtụ mkparị yana mpụ. Ndị otu a kpọrọ ‘Concerned Rela ikwu’ wetakwara ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi akụkọ a ụdị ebubo a. Edemede dị oke egwu edepụtara na New Magazine Magazine nke gosipụtara nkatọ sitere n'aka ndị òtù mbụ bụ ndị kpuchiri Templelọ Nsọ na onye ndu ya, o doro anya na ọ bụ ihe na-akpali akpali ịkwaga Jones ozugbo na Guyana, nke ọ na-ahapụbeghị (Moore 2009: 38-39).
N’oge ụfọdụ n’afọ 1977, a bịara mara ọrụ ugbo dị ka Jonestown. [Foto dị n'aka nri] Ọnọdụ siri ike, mana olileanya dị elu maka ndụ na "Ala Nkwa ahụ," dịka ndị otu ụlọ nsọ nọ na United States kpọrọ ya. Ọrụ dị mkpa iji lekọta otu puku mmadụ mkpụrụ obi dị ukwuu. Ndị otu na-arụ ọrụ ugbo, iwu ụlọ, mmezi (dị ka isi nri na ịsa akwa), nlekọta ụmụaka maka ụmụ obere 304 n'okpuru afọ 18 bi ebe ahụ, agụmakwụkwọ, ahụike, na ịchọta ego (na-eme ihe ịre na Georgetown, nke anaghị adị mfe ịnweta site na Jonestown ). Onye ọ bụla nyere aka na obodo, oge ụfọdụ na-arụ ọrụ iri na otu ụbọchị, ụbọchị isii n'izu. Anyasị jupụtara na nzukọ, mmemme agụmakwụkwọ, nkuzi asụsụ Russian (maka ihe ndị mmadụ kwenyere na ọ ga-aga Soviet Union nso) na ọrụ ndị ọzọ. Ndị bi n'ụlọ obibi, a na-etolitekarị ụmụaka na-abụghị nne na nna ha.
Na mbu nri zuru oke, mana ka ọtụtụ mmadụ na-erute, oke nri pere mpe, nke gụnyere agwa na osikapa, nwere anụ ma ọ bụ akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ maka nri mgbe ndị mpụga bịara obodo ahụ. Mgbe ndị mmadụ dịka ndị ọrụ nnọchi anya US, ndị nnọchi anya gọọmentị Guyana, na ndị ezinụlọ na ndị nkwado na ndị enyi bịara, ndị bi na Jonestown natara obere okwu iji hụ na onyinyo ahụ e gosipụtara nke Jonestown dị mma ma kwenye.
Ọ bụ ezie na ụlọ nsọ ahụ toro ndị otu 20,000, ọ ga-yikarịrị ka ndị otu California nọ na 5,000, yana ndị bịara oge niile na-agbakọ n'etiti 2,000 na 3,000 (Moore 2009: 58). Otutu n’ime ndị hapụrụ afọ ole na ole abụwo ndị otu n’okpụrụ-ụzọ nke Onye-isi-nduzi temple, tinyere ndị na-ahụ maka mkpebi ikpe-mkpa, atụmatụ ego na iwu, na nlekọta nke nzukọ a. Ha ghọrọ ndị si n'ezi ofufe dapụ, ya bụ, ndị na-emegide ọha na eze nke Peoples Temple (dị iche na ndị hapụrụ nzukọ ahụ). Otu n'ime ndị “nkwarụ” a bụ Tim Stoen, onye ọkaiwu Templelọ Nsọ na aka nri Jim Jones. Stoen nyere ndị otu na-eche nche gbasara ndị otu a ma ike kpakpando ya na ịhazi nzukọ, ọ bụkwa isi ihe ga-aga nke ọma na mgbasa ozi ọha na eze nke ezubere iji zọpụta ndị ikwu bi na Jonestown, na iweta Jim Jones na Peoples Temple. Ndị metụtara metụtara ebubo boro ebubo na Jonestown na-arụ ọrụ dị ka ogige ịta ahụhụ, ma kwuo na Jones tụgharịrị uche ndị gara Guyana wee debe ha ebe ahụ ka uche ha ghara. (Moore 2009: 64-65; lee “Mkpesa maka imebi iwu ụmụ mmadụ“ nke e bipụtara na 11 Eprel 1978).
Nwatakịrị a na-esote maka ndị ikwu metụtara (na, ọ dabara na, maka Peopleslọ Nsọ Peoples) bụ nwatakịrị nwoke aha ya bụ John Victor Stoen, [Foto dị n'aka nri] nwa Grace Stoen, onye ọzọ si n’ezi ofufe dapụ. Ọ bụ ezie na Tim Stoen bụ nna na-etinye aka, ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado nke kwuru na ọ gbara ume inwe mmekọrịta mmekọahụ n'etiti nwunye ya na Jim Jones, na John Victor bụ ngwaahịa nke mmekọrịta ahụ (Moore 2009: 60-61). Tim na Grace sonyeere aka ịlụ ọgụ maka ijide nwatakịrị ahụ, nkwa Jones jidesiri John Victor ike, ruo ọnwụ, mere ka akụkụ abụọ ahụ nwee mkpali.
Ka ndị nchekwa Stoen na-alụ ọgụ, ndị bụbu ndị otu ụlọ nsọ bụ Deborah Layton na Yolanda Crawford gbapụrụ na Jonestown ma bịanye aka n'akwụkwọ nkwado na-akọwa ihe ha mere mgbe ha bi ebe ahụ. Ndị ezinaụlọ bidoro ịkpọtụrụ Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị, nke n'aka nke ha duziri ndị isi nke ndị nnọchi anya US na Guyana ka ha gaa Jonestown wee lelee ndị ikwu dị iche iche. Na mgbakwunye na isonye na okwu njide John Victor, Tim Stoen gbara akwụkwọ ọtụtụ nsogbu megide ụlọ nsọ iji weghachite ego na ihe onwunwe maka ndị ọzọ bụbu ndị otu.
Nrụgide nke ndị ikwu metụtara nyere aka mee ka Jones na ndị nọ na Jonestown daa mbà, o doro anya na ahụike na ndu Jones dara njọ nke ukwuu. N'ihi ya, ndị isi na-edu ndú gụnyere ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na obodo (Maaga 1998). N'oge ụfọdụ, Jones ghọrọ onye na-enweghị ike site na iji ọgwụ ọgwụ edepụtara dị ka Phenobarbital (Moore 2009: 74-75). Ọ ga-efewe iwe ọkụ, naanị iji mee ka obi dajụọ ya obere oge. O nwekwara nsogbu ikwu okwu mgbe ụfọdụ, ọ bụ ezie na ọ ga-agbagharịkwa ruo ọtụtụ awa nke abalị ruo na sistemụ okwu ọha na eze, na-agụ akụkọ sitere na isi mmalite Soviet na Eastern Bloc, nke gosipụtara echiche ndị isi ike na ndị na-emegide ọchịchị. Amerịka. Ọ na-egosipụtakarị United States dịka nsogbu agbụrụ na nke akụ na ụba "nke ndị na-eso ụzọ ya gbapụrụ site na ịbịa Jonestown (Halllọ Nzukọ 1987: 237). N'ihi ogologo oge ha na-arụ n'ọhịa n'ehihie, na abalị ha na-enwe nzukọ na ihe ọjọọ banyere usoro PA, ndị bi na Jonestown bịara nwekwuo ike ọgwụgwụ na ụra.
Akwụkwọ mkpọsa ndị metụtara nchegbu gbasara ndị otu nọ na Congress mechara kwụọ ụgwọ, ha chọtara onye enyemaka na California Onye nnọchiteanya Leo J. Ryan. [Ihe osise dị n'aka nri] Otu onye omebe iwu, Sammy Houston, kwuru na ndị otu temple gbuela nwa ya nwoke bụ Robert. (Enweghị ihe akaebe iji gosipụta nkwupụta ya, bụ nke ndị uwe ojii nyochachara n'oge ọnwụ Robert, ma nyochaa ya mgbe ihe mechara na Jonestown.)
Ryan kwupụtara atụmatụ ya ịga Jonestown na November 1978. Onye omeiwu ahụ kwuru na ya na-eduzi ozi nchọta na-anọpụ iche, mana ndị Jonestown ahụghị ya n'ụzọ a. Enweghị ndị ọzọ nọ na Congress soro Ryan gaa Guyana, mana ọtụtụ ndị otu metụtara ndị ikwu metụtara, yana ndị nta akụkọ akụkọ bụ ndị dere ederede dị egwu banyere thelọ Nsọ ahụ. Ndị otu ahụ hapụrụ Guyana na November 14, 1978 wee nọrọ ụbọchị abụọ na Georgetown, isi obodo Guyana (Moore 2009: 91). Mgbe mkparịta ụka ogologo oge na ndị ndu Jonestown, Ryan, ọtụtụ n'ime ndị ikwu metụtara, na ọtụtụ n'ime ndị odeakụkọ ahụ kwere ka ha banye n'obodo ahụ na November 17 iji gbaa ndị bi na ya ajụjụ ọnụ, yana ịchọ ndị a sịrị na-ejide ha megide uche ha. Jones gwara Ryan na onye ọ bụla chọrọ ịhapụ Jonestown nwere obi ụtọ ịme ya. Endedbọchị ahụ gwụrụ site na arụmọrụ na-akpali akpali site na Jonestown Express, ndị otu obodo, yana Ryan na-ekwupụta na Jonestown dị ka ọ bụ ihe kachasị mma nke mere ọtụtụ mmadụ. Ìgwè mmadụ ahụ eredụrịrị ọeredụ. Otú ọ dị, n'abalị ahụ, otu onye bi na-enweghị mmasị wegara ma onye nnọchi anya onye nnọchi anya US Embassy na onye nta akụkọ NBC News nọ ya. Akwụkwọ ahụ rịọrọ maka enyemaka iji pụọ na Jonestown (Stephenson 2005: 118-19).
Ryan na ndị òtù ya nọgidere na-agba ndị bi na Jonestown ajụjụ n'echi ya, mana ọnọdụ obi mgbede nke abalị ahụ agbasasịla. Ka ụbọchị ahụ na-aga n’ihu, mmadụ iri na isii bi n’ime ya — gụnyere ndị otu n’ime ezi-na-ụlọ Templelọ Nzukọ-nsọ ​​ogologo oge — rịọrọ ka ha soro ndị otu Ryan gawa. Onye ome iwu ahụ chịkọtara ndị otu ya n'etiti esemokwu dị ukwuu. Ka Ryan gbalịrị ịhapụ Jonestown, onye bi na ya aha ya bụ Don Sly, bụbu di nke a na-echegbu onwe ya, jiri mma wakporo Ryan, na-etinye onwe ya elu ma ọ bụghị onye nnọchiteanya (Moore 2009: 94). Ndị otu ọgbakọ omebe iwu gara n'ụgbọala gwongworo n'ọdụ ụgbọelu, nke dị kilomita isii site na Jonestown na Port Kaituma, bụ ebe kacha nso. Ka ha bidoro ịbanye obere ụgbọ elu abụọ iji kpọga ha Georgetown, mmadụ ole na ole bi na Jonestown ndị sochiri onye omeiwu ahụ na ndị otu ya rutere n'ọdụ ụgbọ elu ahụ meghere ọkụ. Ndị e gburu na nrutu ahụ bụ onye nnọchi anya ọgbakọ Leo Ryan, ndị odeakụkọ atọ — Robert Brown, Don Harris, na Greg Robinson — na otu onye otu Peoples Temple — Patricia Parks, onye chọrọ ịhapụ Jonestown. Mmadụ iri na abụọ ndị mgbasa ozi, ndị nkwarụ gbara arụkwaghịm na ndị ọrụ si n'ọfịs Ryan merụrụ ezigbo ahụ. Abụọ ndị nkwarụ gbara Larry Layton, bụ onye mere ka ọ bụrụ onye nkwarụ, wee banye n'ụgbọelu otu mgbe agbapụ ahụ malitere n'èzí (Stephenson 2005: 120-27).
Laa azụ na Jonestown, ndị bi na ya gbakọtara na nnukwu ụlọ ndozi ahụ. Ọnọdụ dị njọ mgbe mmeri ahụ gasịrị. Jones kwusara na njedebe abịala maka ndị Jonestown. O kwuru na ụwa dị n'èzí amanyela ha n'ọnọdụ a dị oke njọ, na "mgbanwe igbu onwe onye" bụ naanị nhọrọ ha. Otu onye bi na ya, Christine Miller, kwenyere, ma jụọ maka ịga Russia, na-ekwu na ya chere na ụmụaka kwesịrị inwe ohere ibi. Ndị ọzọ bi n'obodo ahụ tiri mkpu ya, agbanyeghị, ọnwụ wee malite (Moore 2009: 95-96). Ndi nne na nna buru ụzọ nye ụmụ ọhụrụ na ụmụ ha ihe ọ theụ theụ ahụ; ọtụtụ ndị nne wụsara nsị ahụ n'ime ụmụ ha tupu ha ewere nsị ahụ n'onwe ha (Halllọ Nzukọ 1987: 285). Ndị okenye wee were nsị ahụ si na nnukwu ite odo na-acha odo odo Flav-R-Aid, ụdị British Kool-Aid, jikọtara ya na potassium cyanide na ọtụtụ ndị na-edozi ahụ na ndị na-eme ka ahụ dị jụụ (gụnyere Valium, Penegram, na chloral hydrate) (Hall 1987: Ogbe 282). Werefọdụ gbanyere ọgwụ, ụfọdụ drankụọ ihe ọ fromụ fromụ na iko, ụfọdụ tinyekwara ya n'ime ọnụ. Agbanyeghị na ndị nche ji ngwa ọgụ kwụchiri mmadụ ọ bụla ịpụ, n’ikpeazụ ha narakwara nsi ahụ. Otú ọ dị, Jones nwụrụ site na mgbọ egbe ya n'isi: autopsy enweghị ike ikpebi ma ọnwụ ya ọ bụ igbu ọchụ ma ọ bụ igbu onwe ya. N’agbanyeghi na akuko mbu banyere nke di iche, nani otu onye ozo nwuru site nolu egbe, Annie Moore. Sharon Amos, onye bi n'ụlọ atlọ Nsọ dị na Lamaha Gardens, na Georgetown, natara iwu si n'aka Jonestown igbu onwe ya. O gburu ụmụ ya atọ na ya onwe ya n'ime ime ụlọ ịwụ nke isi ụlọ ọrụ Georgetown. Ọnwụ ikpeazụ nke ndị Guyana n’ụbọchị ahụ bụ 918: 909 na Jonestown; ise na ọdụ ụgbọ elu Port Kaituma, anọ na ụlọ Templelọ Nsọ na Georgetown. [Foto dị n'aka nri]
E nwere ihe dị ka otu narị ndị na-anwụghị. Ezinụlọ abụọ na ụfọdụ ndị na-eto eto hapụrụ n'isi ụtụtụ nke 18 wee banye n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke dugara n'obodo Matthews Ridge, nke dị kilomita iri atọ site na Jonestown. E zipụrụ ụmụ okorobịa atọ ka ha ji igbe ndị jupụtara ego aga na nke ndị nnọchi anya Soviet. Mụ okorobịa abụọ ọzọ gbara ọsọ ka ọnwụ na-aga, mmadụ abụọ toro eto zoro na nzuzo. Ọkara iri na abụọ nọ na njem ịzụ ahịa na Venezuela na ụgbọ mmiri na Caribbean. N'ikpeazụ, ihe dị ka mmadụ iri asatọ n'ime ụlọ nsọ ahụ nọ na Lamaha Gardens (gụnyere ndị otu egwuregwu bọọlụ Jonestown) gbanahụrụ ọnwụ site na ịnọ kilomita 150.
Gọọmentị Guyana gọnarịrị arịrịọ nke Ngalaba Ọchịchị US ka e lie ozu ndị dị na Jonestown. Otu ndị otu ndebanye aha ndị agha nke US butere ihe ndị fọdụrụnụ, nke ndị agha US Air Force bugara na Dover Air Force Base maka njirimara nke Federal Bureau of Investigation. [Foto dị n'aka nri] (Ajụjụ ọnụ nke ndị so na bodylift dị na "Nzaghachi ndị agha na Jonestown" 2020). Embgbasi ozu nke ozu na-amalite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, mana otu nsonaazụ bụ na e bibiri ihe akaebe amụma dị oke mkpa, nke gbochiri mkpebi ziri ezi nke ọnwụ maka mmadụ asaa ndị oplọ Ọrụ Ndị agha nke Pathology kwadoro. Ndị ikwu kwụrụ ihe dịka ọkara nke ahụ, ebe ihe dịka ozu 400 ka bụ ndị a na-amatabeghị ma ọ bụ ndị ekwupụtabeghị. Imirikiti ndị a na-amaghị bụ ụmụaka. Otu ngwakọta ofufe na San Francisco hụrụ otu ebe a na-eli ozu na Oakland, California dị njikere ili ozu ndị a, mgbe ọtụtụ olili ozu ndị ọzọ jụrụ ịjụ nkatọ ịjụ ya. Na Mee, 2011 edere ihe ncheta anọ na ebe a na-eli ozu na ebe a na-eli ozu Evergreen, na-edepụta aha ndị niile nwụrụ na Nọvemba 18, 1978.
Ndị ọka iwu ụlọ nsọ na San Francisco gbara akwụkwọ maka enweghị ego nke ụlọ ọrụ na Disemba 1978, Courtlọikpe Kasị Elu nke San Francisco kwenyere na mbibi na ọnwa na-esote. Onye ọka ikpe Ira Brown họpụtara Robert Fabian ka ọ bụrụ Onye natara akụ ahụ, onye ọka iwu obodo ahụ wee nwee ike ịchọta ihe karịrị $ 8.5 nde na ụlọ akụ gburugburu ụwa, na mgbakwunye na akụ achọtara na San Francisco. Onyeikpe Brown nyere iwu ka ndị niile na-azọrọ na-emegide ụlọ nsọ ahụ rịọ ụlọ ikpe ahụ n'ime ọnwa anọ: azịza 709 (Moore 1985: 344). Na Mee 1980, Fabian tụpụtara atụmatụ iji dozie ijeri $ 1.8 na nkwupụta megide otu ahụ, site na ịnye "Asambodo Onye natara" maka oke ego nke ego Templelọ Nsọ nye ndị gbara akwụkwọ 403 bụ ndị gbara akwụkwọ ọnwụ na-ezighi ezi (Moore 1985: 351). Na Nọvemba, 1983, ụbọchị ole na ole tupu ụbọchị nke ise nke ọnwụ ahụ, ọka ikpe Brown bịanyere aka na iwu nke mechiri ụlọ nsọ Peoples dịka ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ. Lọ ikpe ahụ akwụwo ihe karịrị $ 13 nde (Moore 1985: 354-55).
Usoro nkwenkwe nke Templelọ Nzukọ ndị mmadụ jikọtara ọtụtụ echiche okpukpe na nke ọha na eze dị iche iche, gụnyere Pentikọstal, Christian Social Gospel, socialism, komunizim, na utopianism. Ihe ngosi nke Jim Jones na ebumnuche nke ndi otu ulo uka ndi kwenyere na ochicho ha ga eme ka uwa ka nma jikọtara otutu nkwenkwe na omume ndi a. Lọ Nzukọ ahụ na-akpọ Templelọ Nsọ ndị mmadụ "òtù nzuzo apocalyptic," nke na-atụ anya na njedebe njedebe nke ụwa ndị isi obodo (Hall 1987: 40). Wessinger na-ekewa Peopleslọ Nsọ nke ndị mmadụ dịka otu puku afọ ga-ebibi, nke a na-ahụkarị nke abụọ megidere "Babilọn" nke United States na New Eden nke Jonestown (Wessinger 2000: 39). Echiche ndị a niile na-akọwa ụlọ nsọ ahụ na akụkụ ya.
Jones buru ụzọ mee ụdị Iso Christianityzọ Kraịst na-agba ume nke sitere na Pentikọstal. Ọ dabeere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị dị n'amụma na-agba ọgbakọ ya ume ịrụ ọrụ maka ikpe nkwụmọtọ n'etiti ọha mmadụ. Nnyocha nke ofufe ofufe sitere na Peoples Temple dị na Indiana na California na-egosi ụgwọ Jones maka ọdịnala Black Church (Harrison 2004). Ọrụ gbasoro ụdị ejiji na-akwụghị ụgwọ nke egwu na-arụ ọrụ dị mkpa, akụkụ ahụ na-ekwusi ike ụdị nkwupụta oku na nzaghachi nke Jones. Okwuchukwu ya kwuru isiokwu dị mkpa nye Black Church: ntọhapụ, nnwere onwe, ikpe ziri ezi, na ikpe.
Nkà mmụta okpukpe nke ụlọ nsọ gbanwere, agbanyeghị, ka ọrụ na onye nke Jim Jones dị elu karịa. Chidester na-arụ ụka na nkà mmụta okpukpe nwere njikọ sitere na okwu okwu Jones (Chidester 1988: 52). Na nkà mmụta okpukpe a, Jones kwusiri ike na "Chineke nke igwe" nke Okpukpe ndị Kristian adịghị, mana ezigbo Chineke, nke a na-akpọ Principle or Divine Socialism, dịrị na Jim Jones. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụrụ na Chineke bụ Lovehụnanya, na ishụnanya bụ Ọchịchị, mgbe ahụ ụmụ mmadụ ga-ebi ndụ mmekọrịta ọha na eze iji kere òkè na Chineke. Ọzọkwa, nke a nyere ohere maka nsọpụrụ onwe onye, ​​dị ka Jones hotara John 10:34: “unu niile bụ chi” (Chidester 1988: 53). Ya mere, ndị otu Peoples Temple mere ihe ha kpọrọ "socialism Apostolic," ya bụ, ọhaneze nke ọgbakọ Ndị Kraịst oge mbụ akọwapụtara na Ọrụ 2: 45 na 4: 34-35. “Ọ dịghị onye ga-enwe ala nanị ya. Ọ dịghị onye nwere ike ịnwe ikuku naanị ya. A ghaghi ijide ya n'ozuzu. Yabụ, nke ahụ bụ ịhụnanya, nke ahụ bụ Chukwu, Socialism ”(Chidester 1988: 57, na-ehota Jones na Tape Q 967).
Ka Jones na-enwekwu ntụkwasị obi na ntọala California ya, ọ gbanwere okwu okpukpe maka okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na karia. Ọ katọrọ Iso traditionalzọ Kraịst oge ochie ma kpụzie Akwụkwọ Nsọ, nke ọ kpọrọ "Black Book" nke meworo ka ọtụtụ n'ime ndị nna nna ha ghọọ ohu. Na mbido afọ ndị 1970, o bipụtara akwụkwọ nta dị peeji iri abụọ na anọ nke akpọrọ “Akwụkwọ Ozi Kwụsịrị,” nke ọ depụtara ihe niile na-emegiderịta onwe ha na arụrụala ndị dị na Agba Ochie na Agba Ọhụrụ. Ozugbo ìgwè ahụ kwagara Guyana, Jones kwụsịrị amaokwu okpukpe niile, belụsọ mgbe ndị ọbịa bịara (Moore 2009: 55). Enweghị ofufe na-eme na Jonestown. Nzukọ nzukọ atụmatụ, ịgụ akụkọ, na mmemme ọha na eze dochiri ofufe. Agbanyeghị, ọ dị ka ndị okenye ahụ jigidere nkwenkwe Ndị Kraịst ọdịnala (Sawyer 2004).
Ọ bụ ezie na Jones kwuru na ya bụ onye ọchịchị Kọmunist, Communist Party USA enweghị ndekọ ọ bụla banyere ndị otu ya, ma jụ njikọ ọ bụla na ya mgbe ọ nwụsịrị na Jonestown. Jones mebere komunizim ya ka ọ na-aga, na -emepụta ngwakọta nke mmụta klaasị, mgba mgba ọchịchị, echiche Marxist ahọpụtara, yana nghọta ya banyere mkpa obodo n'oge a. Ọ bụla ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị egwu ya na ndị otu ahụ nwere ike ịkekọrịta gbanwere, n'ihi na ha kwadoro n'ihu ọha ọtụtụ ndị Democratic na-aga ime obodo, steeti, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ozugbo ha kwagara San Francisco. Ọtụtụ ndị edemede ekwuola na helpedlọ Nsọ ahụ nyere aka ịhọrọ George Moscone dị ka onye isi obodo San Francisco, ikekwe ọbụna na-eme aghụghọ iji mee nke a, "mana oke ịtụ vootu nke ndị otu ụlọ nsọ dị na San Francisco yiri ka ọ bụ ezighi ezi nghọta" (Hall 1987: Uche 166).
Kama ịbụ ndị kọmunist na-akụzi ihe, echiche nke Templelọ Nsọ Peoples lekwasịrị anya na ntinye aka na obodo, na ibuli ìgwè ahụ elu karịa onye ọ bụla. Ndi otu a lere anya dika onwe ha dika ndi kachasi elu, na ịchọ ọdịmma onwe onye dika omume kacha ala. Na mgbakwunye, ekwesiri itinye aka na Jim Jones. Nnwale nke iguzosi ike n'ihe mere ka e doo anya na ihe kpatara ya yana onye ndu ahụ. Ọ dịghị onye lere omume dị iche iche anya n'ihi na ha nwere nghọta n'ime echiche ụwa nke na-atụ anya ọbịbịa dị nso, ma ọ bụ site na agha nuklia ma ọ bụ mgbukpọ megide ndị na-acha agba. Site na ịgbaga United States na ịnwa ịmepụta ọha mmadụ ọzọ, ndị otu ụlọ nsọ kwenyere na ha nwere ike ịlanarị enweghị isi a na-apụghị izere ezere, ikekwe ọbụna na-eje ozi dị ka ihe atụ ọhụrụ maka mmadụ. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, okwu Jones na-agbasa agbasa banyere Amagedọn na-abịanụ mebiri ụdị olileanya ọ bụla.
Iji kwalite ngbanwe site na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, elitist onye ọ bụla nke ikeketeorie na-akwalite, Jones gbara ume ịmaliteghachi ọzụzụ, ma ọ bụ indoctrination, na ịchọ ọdịmma onwe onye naanị, populist communism nke ndị socialism kwalitere site na omume a maara dị ka "catharsis." Ọbụna Indianapolis, E mere nzukọ “mkpakọrịta mmezi” bụ nke ndị ụka na-akatọ onwe ha. Mana catharsis dị ka akụkụ mgbe niile nke omume Templelọ Nsọ gbanyere mkpọrọgwụ na Redwood Valley. [Foto dị n'aka nri] Oge Catharsis chọrọ nkwupụta ihu ọha na ntaramahụhụ obodo maka mmebi iwu megide obodo na ndị òtù ya (Moore 2009: 32-33). Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na e boro onye nọ n’afọ iri na ụma ebubo na ọ na-akparị onye agadi, ọgbakọ ga-anụ ihe akaebe ndị ahụ ma tụọ votu ime ihe na-adịghị mma ma ọ bụ ikpe mara ya, nakwa ntaramahụhụ a ga-enweta. Ntaramahụhụ ahụ nwere ike ịbụ ntaramahụhụ siri ike nke otu n'ime ndị agadi mere. Mgbe Jones webatara “Board of Education,” otu bọmbụ nke elekere anọ na anọ n’ogologo na ọkara, wee kenye otu nwanyị buru ibu ka ọ na-eti ihe otiti ndị ahụ: “O siri ike ma mara otú e si eti ọkpọ,” ka Mills kwuru. (1979). E nyere ndị okenye mere mpụ iwu site na ịmanye ha ka ha sonye ndị otu Templelọ Nsọ ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, otu ihe ndekọ nke otu onye òtù ụlọ nsọ bụ́ Edith Roller debere banyere otu ịkụ ọkpọ n'etiti otu nwa okorobịa e boro ebubo maka mmekọahụ, na nwa agbọghọ. Nwanyị ahụ kụpụrụ nwoke ahụ, na-enwe obi ụtọ nke ìgwè mmadụ bịara (Moore 2009: 32-33).
Mmebi iwu ndị ekpughere na catharsis sitere na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, mmekọahụ, na nhụjuanya na ị drugụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ị alcoholụbiga mmanya na-aba n'anya, na obere mpụ nke ndị mmanye iwu ga-ejide ma maa ha ikpe. Ndị otu ụlọ nsọ lere nnọkọ catharsis anya dị ka ụzọ iji melite akparamàgwà mmadụ na-enweghị ịgakwuru ndị isi dịka ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị ọrụ ọdịmma ọha na eze. Mills (1979) na-ekwu na ndị otu kwuru ihe ha chere Jones chọrọ ịnụ, n'agbanyeghị na ndị ọzọ kwenyere na nrụpụta nke catharsis iji dozie nsogbu onwe onye na nke ezinụlọ (Moore 1986).
Ọ bụ ezie na nnọkọ catharsis nke emume dị ka ọ ga-akwụsị na ịkwaga Jonestown, nkatọ onwe onye na mkpokọta mkpokọta nke ndị na-emebi iwu gara n'ihu n'oge Peoples Rallies. Nzukọ ndị a na-eme ugboro ugboro ná mgbede mgbe ụbọchị ọrụ gachara. Ndị mmadụ na-ahụ maka ngalaba dị iche iche, dịka ụlọọgwụ ahụike ma ọ bụ anụ ụlọ, kọọrọ maka agamnihu na nsogbu. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-akatọ ndị mmadụ n'otu n'otu maka mkpebi ndị jọgburu onwe ha na omume ndị yiri ka ha na-achọ ọdịmma onwe ha nanị. Ndị òtù ezinụlọ na ndị mmekọ nwere oke ọrụ iji taa ha ahụhụ.
Ndi mmadu na-eche ihu n'ime, na-ekwu banyere ọnọdụ di na Jonestown. N'abalị ndị ọzọ, White Night na-ele anya na mpụga, na-azaghachi egwu, nke dị adị ma bụrụ nke e chere n'echiche, nke dakwasịrị obodo. Night Night, nke a na-akpọ iji gbochie echiche ịkpa ókè agbụrụ (blackmail, blacklist, blackball, wdg), bụ ihe mberede mberede nke Jones kpọrọ iji kwadebe ndị otu obodo iji chebe onwe ha ọgụ ọzọ. O nwere ike ịbụ na e setịpụrụ ụkpụrụ maka ihe ndị a mgbe Jones gbagidere ọgụ megide onye ya na Redwood Valley (Reiterman na Jacobs 1982: 201-02). Ohihie White “gosipụtara oke nsogbu dị na Jonestown na ohere nke ọnwụ ọnwụ n'oge, ma ọ bụ n'ihi, mwakpo" (Moore 2009: 75). Nke mbụ na Jonestown nwere ike ịbụ na Septemba, 1977, mgbe onye ọka iwu maka Tim na Grace Stoen gara Guyana ịga nye Jones akwụkwọ. Ndị ikom, ndị inyom, na ụmụaka ji ngwa ọgụ na ihe ndị ọzọ a na-eji akọ ugbo, ma guzo n'akụkụ ebe obibi ahụ ruo ụbọchị ole na ole, na-ehi ụra ma na-eri nri na mgbanwe. Ọ na-abụkarị White Nights na-eyi egwu, dịka mgbe ndị mmekọ na Guyana gọọmentị na-apụ apụ. Dika ihe edere na Jonestown gosiri, White Night na-etinyekarị mkparita uka banyere igbu onwe ya, mgbe ndi mmadu kwuputara njikere ha igbu umu ha, ndi ikwu ha, na onwe ha kama ido onwe ha n'okpuru ndi agha.
Ejikọtara ihe ndị na-egbu onwe ha na White Night, ma ha dị nnọọ iche na ndị mmadụ na-eme n'ezie ihe a sịrị na ọ bụ nsí. A tụlere ihe ndị a, bụ ndị jere ozi dị ka ule nke iguzosi ike n'ihe nye ihe kpatara ya, dị ka 1973 mgbe ndị isi ụlọ nsọ asatọ toro eto gbagoro (Mills 1979: 231). Na 1976 Jones gbara ule maka ndị otu na-eme atụmatụ, na-agwa ha na mmanya ha drunkụrụ bụ n'ezie nsị iji hụ etu ha ga-esi meghachi omume (Reiterman na Jacobs 1982: 294-96). N'ịkọkọta akwụkwọ sitere n'aka Deborah Layton, Edith Roller, na akụkọ ndị ọzọ, ọ dị ka enwere opekata mpe ugboro isii igbu onwe onye na Jonestown na 1978 (Layton 1998; Roller Journal, Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples). Ọbụna mgbe a na-agụgharịghị igbu onwe ya, ọ na-aga n'ihu na-abụ akụkụ nke mkparịta ụka izugbe karịa, ọkachasị n'oge Peoples Rallies (Moore 2006). Ndi mmadu degakwara Jones ihe na-akowa igbu mmadu na atụmatụ nke okwukwe, dika ịfụ Pentagon ma ọ bụ ụlọ ndị ọzọ dị na Washington, DC (Moore 2009: 80). Yabụ, mgbe ha anaghị achọ igbu onwe ha, ndị otu ụlọ nsọ na-eche ma na-ekwu maka ya.
Lọ nsọ ahụ nwere usoro nhazi nke pyramidal, ya na Jim Jones na ndị isi ole na ole ahọpụtara na njedebe; Kọmitii Na-eme Atụmatụ gụnyere ihe dị ka ndị otu 100 n'akụkụ elu; ndị otu biri ndụ ọnụ na ọkwa nke ọzọ; na ọkwa na faịlụ n'ozuzu na isi (Moore 2009: 35-36). Ndị dị nso na ntọala pyramid ahụ enwetabeghị otu mmanye, ma ọ bụ itinye aka, dị ka ndị "laa mba" ma ọ bụ na-agbago elu pyramid ahụ. Ọbụna n'ime Kọmịshọn Atụmatụ, enwere ọtụtụ okirikiri. Ndị a gụnyere ndị nyeere Jones aka ịgwọ ọrịa ọrụ ebube adịgboroja; ndị haziri nnyefe ihe onwunwe na-enyo enyo; ndị na-eme aghụghọ aghụghọ (dị ka ịgafe ahịhịa ndị mmadụ); na ndị buuru ego gaa mba ọzọ.
N’agbanyeghi otutu okwu agbụrụ, agbụrụ na ndịiche dị na klas ka dị. Dabere na Maaga, "Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị isi ojii agaghị enwe ike ịbanye n'ọkwa n'ụlọ nsọ" (Maaga 1998: 65). Otu agbụrụ nke ndị na-eto eto asatọ toro eto na 1973, na-ahapụ ihe edeturu nke na-egosi ọganihu nke ndị otu ọcha ọhụrụ na-akwadoghị maka ndị otu nwa ojii nwalere oge:
I kwuru na isi ihe gbanweere ugbu a dị n'ebe ndị ojii nọ. Enweghi ike n'ime
ndị ọcha, dị ka ị si kwuo. N'agbanyeghị nke ahụ, ebee ka ndị isi ojii nọ, ebee ka ndị ọrụ ojii na ndị isi ojii? (“Akwụkwọ Ozi Ndị Ntugharị,” Ntụle ndị ọzọ nke Jonestown).
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị Africa America nwere ọkwá ọchịchị na Jonestown, ikike ime mkpebi (gụnyere ime atụmatụ maka igbu onwe ya ọtụtụ) nọgidere na ndị ọcha.
Jones jiri mmekọahụ mee ihe iji chịkwaa ndị otu ụlọ nsọ. Ọ haziri alụmdi na nwunye, kewaa ibe, ma kewaa ezinụlọ dị iche iche iji mee onwe ya ihe bụ́ isi ndị mmadụ ji enwe mmekọahụ. N'ịkwado ekwesịghị ntụkwasị obi nye onye òtù ọlụlụ, Jones chọrọ ikwesị ntụkwasị obi nye naanị ya, ọbụnadị site na ndị nwoke na ndị nwanyị ọ manyere ka ya na ya nwee mmekọahụ. N'otu oge ahụ, na mbọ ike ọha mmadụ ọhụrụ, agbụrụ dị iche iche, Jones kwalitere mmekorita agbụrụ dị iche iche na ikuchi ma ọ bụ ọmụmụ nke ụmụaka agbụrụ. E guzobere Kọmitii Mmekọrịta nke Planning Commission iji kwado ma nyochaa mmekọrịta dị n'etiti di na nwunye.
Jones bokwara onye ọ bụla ebubo na ya bụ nwoke ibe ya ọ kpọsara onwe ya ugboro ugboro na ọ bụ naanị ezi nwoke na nwanyị (1987lọ Nzukọ 112: XNUMX). Harvey Milk, onye mbụ na-edina ụdị onwe nwoke nwoke na San Francisco County Supervisor, na-agakarị n'ụlọ nsọ ma bụrụkwa onye na-akwado ya, ọkachasị mgbe ọ natara ọtụtụ ozi nkasi obi site n'aka ndị otu na-eso igbu onwe onye ibe ya. Ka ọ na-anabata nkwado Milk, Jones tụkwara aro na mmekọ nwoke na nwoke bụ nsogbu na-esighi na ezi ndị ọchịchị Kọmunist. Nnyocha nke Bellefountaines banyere ụzọ e si emeso nwoke na nwanyị na ụmụ nwanyị na-emekọ ihe na thelọ Nsọ na-ekpughe ebe na-emegiderịta onwe ya nke okwu mkparị na nwoke na nwanyị na nnabata nke mmekọrịta nwoke na nwanyị (Bellefountaine na Bellefountaine 2011).
N’iburu na ọnwụ nke ọtụtụ narị ndị America, ọtụtụ okwu esemokwu bilitere. Ajụjụ ise gbara ọkpụrụkpụ yiri ka ha na-agaghachi n'akwụkwọ ndị ewu ewu na ndị ọkachamara: 1) Kedu etu ime ihe ike si dị n'oge ụlọ nsọ a? 2) Jonestown ọ bụ ogige ịta ahụhụ? 3) Kedụ ọnọdụ ahụike ahụike Jim Jones site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ nwụrụ? 4) O ziri ezi ikpo oku na Jonestown igbu onwe ya, ka obu igbu mmadu? 5) Ndi CIA gbara onwu na Jonestown? Esemokwu abụọ ọzọ apụtawo n'oge na-adịbeghị anya; 6) nke mbụ metụtara arụmụka banyere ma itinye aha Jones ma ọ bụ na ọ gaghị etinye ya na akara ncheta nke edepụtara ndị niile nwụrụ na Nọvemba 18,1978; 7) nke ọzọ metụtara mkpa Jonestown na ndụ na ọdịnala ndị America.
1. Kedu etu ime ihe ike dị na Peoples Temple? O doro anya na ime ihe ike dị n'ime Templelọ Nsọ ndị mmadụ n'oge ụfọdụ n'akụkọ ihe mere eme ya, site na mkparị, ntaramahụhụ anụ ahụ, na mmekpa ahụ nke uche, na mmekpa ahụ. Moore (2011) mere ka a mata ụdị ime ihe ike anọ mere, na-achọpụta mmeso ọjọọ na-arịwanye elu na afọ ikpeazụ na Jonestown. Violencedị ime ihe ike kachasị mma nke ọha mmadụ gụnyere ịdọ aka ná ntị, bụ nke e nyere ndị mmadụ ntaramahụhụ maka mmebi iwu omume dị ka ịgha ụgha, izu ohi, aghụghọ, ma ọ bụ mmebi iwu mmekọrịta ọha na eze dị ka ị smokingụ sịga ma ọ bụ ị drugsụ ọgwụ ọjọọ. Ntaramahụhụ ahụ dabara na mpụ: nwatakịrị bitụrụ ibe ya, tara onwe ya aru; ụmụaka ndị zuuru kuki n'ụlọ ahịa ahụ jupụtara na whacks iri abụọ na ise. Ọkwa nke ọzọ gụnyere mgbanwe omume iji gbanwee ụkpụrụ omume bourgeois (ịkpa ókè agbụrụ, mmekọahụ, classism, elitism, ageism, na na). A na-eji ntaramahụhụ anụ ahụ, dị ka ịkụ ọkpọ, ma ọ bụ ntaramahụhụ na-enweghị isi dị ka ịkagbu ụlọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ, ga-eji mesoo mpụ ndị a megide otu ahụ. Otu n'ime ụdị mgbanwe kachasị njọ bụ oge etinyere onye otu na-eme ihe ike na amụ ruo mgbe ọ gbapụrụ (Mills 1979: 269).
"Ọ bụ ezie na enwere ike ịtụle ịdọ aka ná ntị na mmezi omume karịa ma ọ bụ na-erughị ọha mmadụ aka (ma ọ dịkarịa ala na tiori ma ọ bụrụ na ọ bụghị na omume), ụdị abụọ nke ime ihe ike dị n'ime Templelọ Nsọ nke na-eyighị ka ọha mmadụ: njikwa omume na ụjọ" (Moore 2011 100). Njikwa omume gụnyere ikewapụ ezinụlọ, ịkọwara ndị ọzọ (yana echiche nke onwe ya), ịhazi mmekọrịta mmekọahụ, na, otu oge na Jonestown, na-achịkwa akụkụ niile nke ndụ mmadụ na echiche ruo n'ókè o kwere mee. Jones kụziri echiche nke ụjọ zuru oke na-amalite na 1960s na amụma nke agha nuklia, na-aga n'ihu na 1970s na amụma nke mgbukpọ agbụrụ, iwe ndị ọchịchị fascist, na mmekpa ahụ dị egwu. Rorjọ bịara bụrụ nke onwe na Jonestown, na ndị mmadụ na-atụ egwu maka ndụ ha n'oge White Nights, yana ihe mmekpa ahụ na-akpata, dị ka ịta nwanyị ahụhụ site n'ịnwe agwọ; ma ọ bụ, kegide ụmụ okorobịa abụọ n'oké ọhịa ma gwa ha na agụ ga-enweta ha (Moore 2011: 103). Ndị bi na ya kwenyere na ndị iro bu n'obi na mbibi ha, ọ bụ ezie na nke a bụ eziokwu (ndị ikwu metụtara chọrọ n'ezie ikpochapụ Jonestown), ha kwenyesiri ike na ndị iro ha mere atụmatụ ịtọrọ mmadụ, ịta ahụhụ, na igbu ọchụ. Mgbe Leo Ryan mara ọkwa na ọ ga-abịa Jonestown, ụjọ ụjọ juru ebe niile.
2. Jonestown ọ bụ ogige ịta ahụhụ? E nwere nkwekọrịta sara mbara na ọnọdụ dị na Jonestown, n'agbanyeghị na ọ siri ike site n'ụkpụrụ ndị otu etiti, bụ ihe a na-anabata, na ọbụnadị na-ekwenye ekwenye, ruo na mbubreyo 1977. Nkwupụta nke ndị ọbịa nke ndị nnọchi anya US Embassy dịkarị mma. Onye nnochite anya United States Maxwell Krebs kọwara ikuku dị na obere ọhịa dị ka “ezigbo izu ike na enweghị ntụpọ” na 1975. “Echiche m bụ maka otu onye nwere nnukwu mkpali, ọkachasị ọzụzụ onwe ya, yana ọrụ nke nwere ezigbo ohere nke opekata mpe ihe ịga nke ọma ”(Kọmitii US na Mba Ofesi 1979: 135). Otú ọ dị, ka ọ na-erule etiti 1977, njupụta nke ndị kwabatara karịa ndị obodo nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu siri ike, ọkachasị n'ihe gbasara nri na ụlọ. Ọnọdụ obibi ndụ na ọnọdụ ọrụ, tinyere nkụja nke ụjọ, bidoro na 1978, na ndakpọ dị njọ weere na ọnwa ọkọchị nke afọ ahụ.
Ọ bụ eziokwu, dị ka ndị ikwu metụtara boro ebubo ha na nkwupụta nke “Ihe ndị ruuru mmadụ Imebi iwu, ”a na-enyocha akwụkwọ ozi na-abata ma na-apụ apụ; a machibidoro njem ahụ iwu; na ndị òtù ezinụlọ enweghị ike ịga leta ndị ikwu na Jonestown; na ndị bi na-etinye ihu ha kachasị mma maka ndị ọbịa. [Foto dị n'aka nri] N'etiti oke ọhịa, nke nwere naanị obodo abụọ nwere ike ịnweta n'okporo ụzọ (Port Kaituma dị kilomita isii site na Matthews Ridge 30 kilomita dị anya) ma jikọọ naanị site na ikuku ma ọ bụ osimiri gaa n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, Jonestown bụ obodo gbara gburugburu, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịpụrụ adịpụ na kọntaktị na ndị mpụga. N'otu oge ahụ, Jonestown enwetaghị profaịlụ ya zuru oke ma e wezụga mkpasu iwe nke "ndị mmegide ọdịbendị" (Hall 1995). Dị ka Halllọ Nzukọ na-ahụ, ndị na-eme mgbaasị na-ekere òkè na nsonaazụ na Jonestown na Mt. Kamel. N'isiokwu ha nke na-enyocha ihe ịtụnanya (nke ime) na-eduga na ime ihe ike na mmegharị okpukpe ọhụrụ na ihe ndị ọzọ (na mpụga), Anthony, Robbins, and Barrie-Anthony (2011) na-akọwa "ịdabere na-egbu egbu" nke "mmegide na omume nzuzo, ”Ma na-atụ aro na“ ụfọdụ ndị nwere ike bụrụ ndị ngụkọta zuru oke nke na ha dị oke ngwangwa na mmetụta [na-akpali], ”ya bụ, na-eme atụmatụ zuru oke site na mpụga ụwa (2011: 82). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọnọdụ dị na Jonestown nwere ike ịzaghachi na ọkwa nke ndị bi na-eyi egwu kwenyere na ha dị.
3. Kedu ọnọdụ ahụike ahụike Jim Jones? Okwu mmalite ka Rosenbaum's Na-akọwa Hitler (1998) na-enye nkọwa nke nyocha ya banyere ọtụtụ mbọ iji ghọta otú Adolf Hitler si bụrụ onye na ihe ọ bụ. Ndepụta Okwu, Ọchịchọ maka mmalite nke ihe ọjọọ ya, nwekwara ike ịkọwa ọtụtụ ọrụ ndị ọkachamara na ndị ọkachamara banyere Jim Jones. Akwụkwọ nkọwa Rosenbaum nke nkọwa (mountebank, ezi onye kwere ekwe, mesmeric occult messiah, scapegoat, omekome, nwata e metọrọ, “Nwoke ukwu” na onye ọzọ metụtara) nwere ike ịbụ na etinyere ya na Jones. Akaụntụ sitere na Jones ịbụ onye nzuzu na onye ọjọọ site na nwata (Reiterman na Jacobs 1982, Scheeres 2011); na “akọ na uche” ya ime ezi ihe mechara kpuchie ya (Rose 1979); na "nrụrụ aka ndị na-ege ntị" duhiere ya ikwere okwu ya (Smith 2004); na nyocha ndị ọzọ.
O doro anya na Jones na-adọrọ adọrọ, na-eche echiche, na-eche echiche, ma na-eche echiche. O doro anya na ikike ya dị ka onye na-agwọ ọrịa. Otu ihe ọtụtụ ndị lanarịrị Jonestown na ndị bụbu ndị otu ụlọ nsọ kwenyere bụ na Jones nwere ikike paranormal. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ okwukwe mere na Franciscolọ San Francisco, ọbụlagodi ụfọdụ ndị na-akatọ ọgwụgwọ ndị ahụ kwetara na oge ụfọdụ ọgwụgwọ ahụ bụ ezigbo (tụlee Beck 2005 na Cartmell 2006).
O doro anya na Jones malitere iji barbiturates na San Francisco, na ikekwe na mbụ, iji jikwaa oge ya. Ojiji ọgwụ ọjọọ ya pụtara ogologo oge na Jonestown. Ndị ọrụ nnọchi anya US na-eleta 7 Nọvemba 1978 kwuru na okwu ya "dị oke njọ" na ọ dị ka isi enweghị isi (Kọmitii US na Ofesi Ofesi 1979: 143). Ihe ọdịyo emere na Jonestown gosipụtara nkwenye echiche Jones na okwu adịghị mma. Nnukwu ozu ya gosipụtara ọkwa pentobarbital na-egbu egbu na imeju na akụrụ ya, si otú a na-egosi ị addictionụ ọgwụ ọjọọ ("Autopsies" 1979).
4. Ọnwụ ndị dị na Jonestown ọ bụ igbu onwe ya ka ọ bụ igbu ọchụ? Ajuju nke ma ndi bi na Jonestown jiri aka ha gbuo onwe ha, ma obu ma a manyere ha, ya mere egburu ha, na-aga n'ihu na mkparita uka di omimi (“Ọ Bụ igbu ọchụ ka ọ bụ igbu onwe onye?” 2006). Ihe akaebe sitere na ihe egere mere na 18 November (Q 042) yana akụkọ ndị akaebe hụrụ na-egosi na ndị nne na nna gburu ụmụ ha; Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị na-eto eto jiri aka ha drankụọ nsị ahụ, ụmụaka 304 na obere ụmụaka n'okpuru afọ iri na asatọ ka a na-ahụta dị ka ndị gburu ọchụ. Foundfọdụ ndị okenye achọtara ka ha nwụrụ anwụ na akwa ha, o doro anya na a gbara ha ọgwụ, ma gbue ndị a. Ebe mkparịta ụka dị na ndị okenye, ma ọ bụrụ na ha ahọrọ ịnwụ n'ezie ma ọ bụ na ndị otu nchebe Jonestown na-amanye ha. Mgbe ha nyochachara obere oge ihe nkiri ahụ, Dr. Leslie Mootoo, onye isi ọkaibe nke gọọmentị Guyana, kwuru na ọ hụrụ sirinji na-enweghị agịga, nke nwere ike itinye nsị n'ọnụ ụmụaka ma ọ bụ ndị toro eto na-achọghị. O kwukwara na ọ hụrụ akara mgbapu n'azụ mmadụ iri asatọ na atọ n'ime mmadụ 100 ọ nyochara (Moore 2018a). Mana dika Odell Rhodes si kwuo, otutu ndi mmadu nwuru “nwua ma onweghi obi” Grover Davis, onye lere ndi gburu onwe ha anya tupu ya ekpebie izobe onwe ya n'ime olulu kwuru na anughi m na onweghi onye kwuru na ha adighi njikere were gbaa igbu onwe… Ha dị njikere ime ya "(Moore 1985: 331). Onweghi onye gbara ọsọndụ ụgbọ mmiri ahụ, dị ka Skip Roberts si kwuo, Onye na-enyere Kọmịshọna na-ahụ maka mpụ na Guyana na-enyocha ọnwụ ahụ, “maka na ha chọrọ ịnwụ. Ndị nche adịghịdị mkpa na ngwụcha ”(Moore 1985: 333).
Ogologo oge gara aga ka ndị otu ụlọ-nsọ ​​nakweere mkpa ọ dị inye ndụ ha maka ikpe ziri ezi na nnwere onwe. Ndị Africa America bi na 1960s na 1970s hụrụ ka ndị na-akwado ndọrọndọrọ ọchịchị dara na ọnwụ ihe ike nke Medgar Evers, Malcolm X, Martin Luther King Jr., na ndị isi nke Black Panther Party. Huey Newton nke Panthers ahụwo na ime ihe ike chọrọ itinye aka na "igbu onwe onye mgbanwe," ya bụ, njikere itinye ndụ mmadụ na ntanetị n'ihi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbanwe agbanwe na 1970s na-egbu onwe ha. Ọ bụ ezie na Jones ji asụsụ Newton mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ gbanwere echiche ahụ n'ụzọ dị ịrịba ama. Newton rụrụ ụka na mbugharị mgbanwe, na nkọwa, na-eduga na esemokwu na steeti, na steeti mechara gbue ndị na-emegide ya iji chebe onwe ya na ụlọ ọrụ ya. Jones kọwara "mgbanwe mgbanwe ndu" nke pụtara n'ụzọ nkịtị, nke pụtara na mmadụ ga-egbu onwe ya iji kwalite mgbanwe ahụ (Harris and Waterman 2004).
Okwu nke igbu onwe onye pụtara ìhè n'ọtụtụ akwụkwọ temple. Mmemme na Templelọ Nsọ dị na San Francisco na mbipụta nke akwụkwọ akụkọ otu ahụ, Nzukọ ndị mmadụ, lekwasịrị anya n'eziokwu nke ịta ahụhụ na ọnwụ. Akwụkwọ ozi na ihe odide e degara Jones na ndị òtù ezinụlọ gosipụtara njikere ịnwụ n'ihi nkwenkwe ha. Ihe ọdịyo na-akwado nkwa ndị a na-agbanwe agbanwe igbu onwe ha. Ndị metụtara nchegbu kwuru na otu onye bi na Jonestown dere n'April 1978 na otu ahụ ga-ahọrọ ịnwụ karịa ka a ga-esite n'otu kọntinent gaa na nke ọzọ (Moton 1978). Ozi ndị ọzọ banyere ihe igbu onwe onye si na Yolanda Crawford na Eprel na Deborah Layton na June.
Agbanyeghị na ndị bi na Jonestown ji okwu igbu onwe ha kpọrọ ihe, ọ ga-abụ ihie ụzọ kwubie na, n’ụbọchị ikpeazụ, ha kwenyere na ha na-ekere òkè na ntụgharị ọzọ. Mgbagha nke ndị otu ogologo oge kpataara obodo ahụ nsogbu, yana akụkọ banyere ọnwụ na ọdụ ụgbọ elu ahụ, ha ghọtara na njedebe nke nnwale obodo ha dị nso. Oké iwe nke Christine Miller ji rụọ ụka megide igbu onwe ya na-egosi na o ji atụmatụ ahụ kpọrọ ihe. Ma mgbe ndi mbu ndi n’eru ogwu a nwuru, o doro anya na nke a bu ezigbo ihe. Ọ bụrụ na ndị nne na nna bu ụzọ nye ụmụ ha ọgwụ, o yikarịrị ka ha bu n'obi na-etinyekwa onwe ha nsị. Ha kwenyere na ndị agha ga-ata ụmụ ha ahụhụ n'ihi ogbugbu e gburu Ryan; ha huru njedebe nke Ala Nkwa ahu na mbuso agha nke Ryan na ndi iro ha; ha emeela ihe na-egbu nsi ahụ; ha kwenyere na ikwesị ntụkwasị obi nye ibe ha na ihe kpatara ha chọrọ ọnwụ. Ka o sina dị, ajụjụ ka dị, na, dị ka Bellefountaine si dee, “Mgbe a na-ajụ ajụjụ ma a ga-ewepụta ọnwụ na Jonestown dị ka igbu ọchụ ma ọ bụ igbu onwe, ọtụtụ mmadụ na-enwe ahụ iru ala isonyere okwu abụọ ahụ na ahịrịokwu nke kpuchiri nhọrọ abụọ ahụ [igbu ọchụ-igbu onwe ha ]. Mana ọ dabara adaba ”(Bellefountaine 2006).
5. Jonestown ọ bụ nsonazụ nke ndị ọchịchị gbara izu? Ọtụtụ echiche ịkpa nkata amalitela banyere ọnwụ na Jonestown n'ihi akụkọ na-emegiderịta onwe ha banyere ọnwụ, enweghị nkwekọ na akụkọ akụkọ, na ọnwụ nke otu ndị ọzọ na-esonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị egwu nke Templelọ Nsọ. Akuko mbu banyere onwu a sitere na Central Intelligence Agency, na ozi ekwuputara na ntaneti nkwukọrịta ọgụgụ isi ("Ntuziaka NOIWON" 1978). Nke a, yana eziokwu ahụ bụ Richard Dwyer, onye osote onye isi ndị ọrụ ala ọzọ na US Embassy na Georgetown, nwere ike na-arụ ọrụ maka CIA, dịka onye nnọchi anya US John Burke, jere ozi dị ka mmanụ ọkụ maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke echiche izu ọjọọ na mbipụta abụọ ahụ. na ụdị eletrọniki (Moore 2005). Fọdụ na-ekwu na Jim Jones bụ onye arụrụala CIA na-arụrụ ọrụ bụ onye tinyere aka na nyocha njikwa uche. Ndị ọzọ na-ekwusi ike na gọọmentị United States gburu ndị niile bi na Jonestown n'ihi na ọ na-atụ ụjọ mmeri nke mgbasa ozi maka Soviet Union ma ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ ụlọ ọhụrụ maka Peoples Temple. Ndị ọzọ na-arụ ụka na Jonestown na-anọchite anya nkata aka nri iji gbue mgbukpọ na ndị isi ojii America (Helander 2020). Enweghị otu n'ime echiche ndị a na-atụle ebe a n'ihi na, ruo ugbu a, enweghị ihe akaebe karịrị nkwenye na ịkọ nkọ. Nyocha nke uche na-adabere n'echiche nke ịkụ ụbụrụ ma ọ bụ nrụgide na-ekwenyeghịkwa ịkọwa nke ọma ihe mere na ihe kpatara ya. Ebumnuche nke onye ndu nzuzo dị ike, nke nwere ike ime ka ndị nwere ezi uche bụrụ zombies na-enweghị uche, daa mgbe anyị na-ege ntị na mkparịta ụka ndị obodo na-ejide na ụda Jonestown na mkparịta ụka ndị gara aga nke ndị Templelọ Nzukọ Ezumezu ka nwere banyere ahụmịhe ha n'ime usoro ahụ.
6. Aha Jim Jones kwesiri ịnọ na ncheta nke Jonestown? Rev. Jynona Norwood, onye ụkọchukwu Africa America si Los Angeles, onye nne ya, nwanne nna ya na ụmụ nwanne nne ya nwụrụ na Jonestown, duziri ememe ncheta na ebe a na-eli ozu Evergreen na Oakland, California [Foto dị n'aka nri] kwa ọnwa Nọvemba 18 kemgbe 1979. Norwood nwetara ego iji wuo ihe ncheta na saịtị ahụ, na 2008 wepụtara abụọ nnukwu granite nwere aha ụfọdụ, ma ọ bụghị ha niile, ndị toro eto nwụrụ na Jonestown. Dị ka Ron Haulman si kwuo, onye na-elekọta ebe a na-eli ozu, Otú ọ dị, ugwu na-esighị ike enweghị ike ịkwado nha ma ọ bụ ibu nke ihe ncheta ahụ (Haulman 2011). Na 2010, na-enwe nkụda mmụọ n'ihi nwayọ nwayọ nke usoro ncheta ahụ, ndị ikwu atọ nke ndị Jonestown ahụ (Jim Jones Jr., John Cobb, na Fielding McGehee) mepụtara Jonestown Memorial Fund wee banye nkwekọrịta na ebe a na-eli ozu Evergreen, na-ekwenye ịmepụta ihe ncheta na-agbanwe agbanwe. ya na nsogbu gburugburu ebe obibi na ugwu (McGehee 2011). Na 2011 mmadụ atọ ahụ bulitere $ 20,000 n’ime izu atọ site na mmadụ 120 ndị bụbu ndị otu temple, ndị ikwu, ndị mmụta, na ndị ọzọ. Na Mee 2011, Norwood gbara akwụkwọ iji kwụsị itinye ihe ncheta ahụ, na-ekwu na ya nwere ebe ọ na-ekwu ebe a na-eli ozu. Thelọ ikpe ahụ kpebiri ya, ebe ọ bụ na n'oge uwe ya, ncheta ọhụrụ ahụ (akara anọ granite nke edepụtara aha ndị niile nwụrụ) adịlarị.
Na mgbakwunye na nkwupụta nke ihe kacha mkpa, Norwood jụrụ itinye ntinye Jim Jones na aha aha. Ọ bụ ezie na ha maara mmegide na nchegbu gbasara gụnyere aha Jones na ihe ncheta ahụ, ndị na-ahazi Jonestown Memorial Fund rụrụ ụka na nkume anọ ahụ na asatọ na-arụ ọrụ dị ka akara ngosi akụkọ nke ọnwụ nke ndị niile nwụrụ na November 18, 1978. N'ihi nke a, aha Jim Jones pụtara, edepụtara mkpụrụedemede n'etiti ndị ọzọ niile akpọrọ "Jones" nwụrụ n'ụbọchị ahụ.
7. Gịnị bụ ihe mmụta nke Jonestown? Jonestown na Jim Jones abanyela n'okwu America dị ka koodu maka nsogbu nke ndị òtù nzuzo na ndị isi nzuzo (Moore 2018b). Na esemokwu dị n'etiti ndị na-emegide ndị mgbagha na ndị otu okpukperechi ọhụrụ na 1980s, ndị nne na nna, ndị na-eme ihe ngosi, ndị ndụmọdụ na-apụ apụ, na ndị ọkachamara na-arụtụ aka na Jonestown dị ka ụkpụrụ nke ihe niile nwere ike ịgahie na okpukpe na-enweghị isi (Shupe, Bromley, na Breschel 1989). Dika ndi ode akwukwo a dere, "Enwere uru ihe atụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa maka mmeghari na mmemme dịka Jonestown" (1989: 163-66). Ihe karịrị afọ iri atọ mgbe ihe omume ahụ gasịrị, Jonestown na Jim Jones na-egosipụta ihe ọjọọ, ihe egwu, na ara. Ndị nke lanarịrị, tụlere na ọ bụ nnwale amabeghị nke nwere ike na ntinye aka nke ndị otu na ịha nhatanha agbụrụ na ikpe nkwụmọtọ ọha mmadụ.
Tụkwasị na nke ahụ, okwu ahụ bụ "ị drinkingụ Kool-Aid" achọtala ebe na-adịgide adịgide na akwụkwọ ọkọwa okwu America (Moore 2003). A na-eji ya eme ihe n'ụzọ pụtara ìhè ma ọ bụ na-awụli elu na brọda ahụ, ma ọ bụ ịbụ onye otu egwuregwu, ma na-ahụkarị ojiji ya na egwuregwu, azụmahịa, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dika odi otutu otutu okwu nkpuru okwu, otutu ndi mmadu ji okwu ugbua di obere ka ha cheta mmalite ya na ihe omume Jonestown. Ndị na-anwụ ndụ nke Templelọ Nzukọ Alaeze na-ama jijiji ma na-ewe iwe site n'okwu ahụ, na ụzọ o si ele ndị nwụrụ anwụ anya (Carter 2003).
Mkparịta ụka banyere okwu ndị a na ndị ọzọ na-aga n'ihu, obi abụọ adịghị ya na ọ ga-aga n'ihu n'ihi ọdịdị na-awụ akpata oyi nke ọnwụ. [Foto dị n'aka nri] Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku, nke akwụkwọ gọọmentị ka na-adịgide adịgide, na-egosi na a ka ga-ede akụkọ ikpeazụ. Faịlụ ndị a nwere ike binye nkwado na echiche ndị na-agba izu site na ikpughe ogo gọọmentị ịma tupu nke ọnwụ na Jonestown. N'aka nke ọzọ, ozi ha na-enye nwere ike ọ gaghị eme ihe karịrị ịgbakwunye nkọwa na akụkụ nke akụkọ ahụ ka na-edochaghị anya. Ihe ọ bụla akwụkwọ ndị a na-ekpughe, akụkọ ahụ ga-anọgide na-ezughị ezu ma zoo, ndị na-eme nchọpụta ugbu a na ọdịnihu ga-anọgide na-agba mgba na nsogbu nke na-anọgide Jonestown.
Foto # 1: Jim Jones na-ekwu okwu site na ikpo okwu nke ebe nsọ dị na San Francisco, 1976. Site na ikikere site na Jonestown Institute.
Foto # 2: Peoples Temple Full Gospel Church dị na Indianapolis, Indiana. Foto si n'aka Duane M. Green, 2012, Jonlọ Ọrụ Jonestown ..
Foto # 3: Jonestown ndị ọsụ ụzọ bụ ndị Jim Jones gara, 1974. Site n'aka Doxsee Phares Collection, Jonestown Institute.
Foto # 4: Igwe ikuku nke Jonestown, 1978. Site n'ikike sitere n'aka Jonestown Institute.
Foto # 5: John Victor Stoen, ihe gbasara njide ejidere n'etiti Jim Jones na Grace na Timothy Stoen. Foto sitere n'aka California Historical Society.
Foto # 6: Congressman Leo J. Ryan, onye gburu ndị bi na Jonestown na 18 November 1978. Mmadụ anọ ọzọ nwụrụ na mwakpo ahụ. Foto sitere n'aka California Historical Society.
Foto # 7: Anya ikuku nke Jonestown na ahụ dị ntakịrị. Foto sitere n'aka ụlọ ọrụ Jonestown.
Foto # 8: ndị agha ndị agha US nọ na-ezukọ na-anọgide na Jonestown. Foto si n'aka Preston Jones, Mahadum John Brown.
Foto # 9: Ihe osise mara mma nke Jim Jones guzo na ụmụaka nke agbụrụ dị iche iche. Ewere nke a dika "Egwurugwu Egwurugwu," ihe mgbaru ọsọ nke ndị otu ụlọ nsọ Peoples. Foto sitere n'aka ụlọ ọrụ Jonestown.
Foto # 10: Childrenmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma banyere ụlọ nsọ San Francisco ụka, 1974. Site n'aka nnabata site na Jonestown Institute.
Foto # 11: Onye ọrụ ugbo na Jonestown. Foto sitere n'aka California Historical Society.
Image # 12: Ihe anọ e dere na granite arụnyere na ebe a na-eli ozu Evergreen na Oakland, California, na 2011. E nwere esemokwu banyere gụnyere aha Jim Jones na mbadamba ihe ndị a. Foto si n'aka John Cobb na Regina Hamilton.
Image # 13: roadzọ na-aga Jonestown na 2018. Foto site n'aka Rikke Wettendorf.
Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu na 4 June 2012.
Anthony, Dick, Thomas Robbins, na Steven Barrie-Anthony. 2011. "Ntughari Totalism: Ntughari Na-egbu Obi nke Ime Ihe Ike na Okpukpe." Pp. 63-92 n'ime Ime Ihe Ike na Mmegharị Okpukpe Ọhụrụ, nke James R. Lewis deziri. New York: Oxford University Press.
"Nchekwa onwe." 1979. Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/wp-content/uploads/2013/10/JimJones.pdf na 4 June 2012.
Beck, Don. 2005. "Ngwọta nke Jim Jones." Nkwupụta Jonestown 7. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=32369 na 7 November 2014.
Bellefountaine, Michael. 2006. "Oke Asusu Ruru." Nkwupụta Jonestown 8. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=31975 na 7 November 2014.
Bellefountaine, Michael, na Dora Bellefountaine. 2011. A Lavender Lee n'Templelọ Nsọ: Otu Nwoke nwere mmasị nwoke na Templelọ Nzukọ Ndị Mba. Bloomington, IN: University of Indiana University.
Carter, Mike. 2003. "rinrinụ Kool-Enyemaka." Nkwupụta Jonestown, August 5. Ntụle ndị ọzọ nke estlọ Jonestown na Peoples. Nweta site na https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=16987 na 7 May 2021.
Onyeka Onwenu, Mike. 2006. “Agwọ Templelọ Nsọ; Echiche Anwansi. ” Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=31911 na 4 June 2012.
Chidester, David. 1988 (weghachite 2004). Nzọpụta na igbu onwe onye: Nkọwa nke Jim Jones, Templelọ ndị mmadụ, na Jonestown. Bloomington, IN: University of Indiana University.
Ndị ikwu Gbasara Anyị. 1978. “Ebubo mmebi iwu ndị ruuru mmadụ nke ndị metụtara ndị ikwu metụtara, 11 Eprel 1978. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=13080 na 7 November 2014.
Hall, John R. 1995. "Nkọwapụta nke Ọha na Publictù Na-ahụ Maka Ndụ: Site na Jonestown ruo Mt. Kamel. ” Pp. 205-35 na Armageddon dị na Waco: Echiche Ndị Dị Mkpa n'Aka Alaka David, nke Stuart A. Wright deziri. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Ụlọ Nzukọ, John R. 1987 (2004 reissued). Gbanyere Ala Nkwa ahụ: Jonestown na American Cultural History. New Brunswick: Akwụkwọ azụmahịa.
Harrison, F. Milmon. 2004. "Jim Jones na Ọchịchị Black." Pp. 123-38 n'ime Templelọ ndị mmadụ na okpukpe ojii na America, nke Rebecca Moore, Anthony B. Pinn, na Mary Sawyer dere. Bloomington: Mahadum Indiana University.
Haulman, Ronald. 2011. "Nkwupụta nke Ronald Haulman na Mmegide nke Ngwa maka Usoro Mgbochi Nwa Oge." Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/wp-content/uploads/2013/10/Norwood5a.pdf na 4 June 2012.
Helander, Henri. 2020. "Akụkọ ọzọ (Nzuzo) Ndepụta Usoro." Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=95357 na 12 March 2020.
Layton, Deborah. 1998. Ndidu Eduhie: Akụkọ Onye Nzọpụta nke Jonestown nke Ndụ na Ọnwụ na Templelọ Nzukọ Ndị Mba. New York: Akwụkwọ Anchor.
Levi, Ken. 1982. Ime ihe ike na nkwa okpukpe: Ihe Jim Jones's Peoples Temple Movement na-emetụta. Mahadum Park: The Pennsylvania State University Press.
Maaga, McCormick Mary. 1998. Aringnụ Olu nke Jonestown. Syracuse: Syracuse University Press.
McGehee, eldkwado M. III. 2011. "Mgbasa Ozi Maka Ncheta Ọhụrụ: Akụkọ Nkọwa Dị Mkpirikpi." Nkwupụta Jonestown 11. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=34364 na 7 November 2014.
"Nzaghachi ndị agha na Jonestown." 2020. Siloam Springs, AR: Mahadum John Brown, na https://www.militaryresponsetojonestown.com/ na 20 March 2020.
Mills, Jeannie. 1979. Afọ isii na Chineke: Ndụ n'ime Rev. Jim Jones's Peoples Temple. New York: A & W Ndị nkwusa.
Moore, Rebecca. 2018a. "Nnyocha nke Dr. Leslie Mootoo." Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=83848 na 12 March 2020.
Moore, Rebecca. 2018b. "Iwu Godwin na Jones 'Corollary: Nsogbu nke iji oke oke mee amụma." Nova Religio 22: 145-54.
Moore, Rebecca. 2011. "Nkọwa nke Mkpagbu, Ahụhụ, na Martyrdom: Ime Ihe Ike na Peoples Temple na Jonestown." Pp. 95-11 n'ime Ime Ihe Ike na Mmegharị Okpukpe Ọhụrụ, nke James R. Lewis deziri. New York: Oxford University Press.
Moore, Rebecca. 2009 . Ịghọta Ụlọ Nsọ Jonestown na Peoples. Westport, CT: Onye nlekọta.
Moore, Rebecca. 2006. "Sacrament nke igbu onwe." Nkwupụta Jonestown 8. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=31985 na 7 November 2014.
Moore, Rebecca. 2005. "conghazigharị Eziokwu: Atụmatụ Nzuzo Banyere Jonestown." Pp. 61-78 na Okpukpe ọhụrụ, nke James R. Lewis na Jesper Aagaard Petersen dere. New York: Mahadum Oxford University. Dịkwa na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=16582.
Moore, Rebecca. 2003. "rinrinụ Kool-Aid: Mgbanwe Ọdịbendị nke Ọdachi." Nova Religio 7: 92-100. Dịkwa na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=16584.
Moore, Rebecca. 1986. Akwụkwọ ozi Jonestown: Mmekorita nke Moore Family 1970-1985. Lewiston, NY: Edwin Mellen Pịa.
Moore, Rebecca. 1985. Akụkọ ọmịiko nke Jonestown: Moore Family Involvement in Peoples Temple. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Moton, Pam. 1978. “Na-egosiputa A maka ndị ikwu metụtara ebubo nke Eprel 11 1978, Akwụkwọ Ozi Nye Ndị Ome Iwu, 14 Maachị 1978.“ Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=13084 na 4 June 2012.
"Ihe ederede NOIWON." 1978. Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=13678 na 4 June 2012.
Reiterman, Tim, na John Jacobs. 1982. Raven: Akụkọ na-adịghị mma banyere Rev. Jim Jones na ndị ya. New York: EP Dutton.
Ala, Edith. “Akwụkwọ akụkọ.” Ntughari uche nke Jonestown na Templelọ Nzukọ. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=35667 na 4 June 2012.
Rose, Steve. 1979. Jesus na Jim Jones: N'azụ Jonestown. New York: Ndị njem ala nsọ.
Rosenbaum, Ron. 1998. Na-akọwa Hitler: Ọchịchọ maka mmalite nke ihe ọjọọ ya. New York: Ụlọ na-adịghị mma.
Sawyer, R. Mary. 2004. "Chọọchị dị na ụlọ nsọ ndị mmadụ." Pp. 166-93 na Templelọ ndị mmadụ na okpukpe ojii na America, nke Rebecca Moore, Anthony B. Pinn, na Mary Sawyer dere. Bloomington: Mahadum Indiana University.
Scheeres, Julia. 2011. Otu Puku Ndụ: Akụkọ Na-adịghị Agbanwe nke Olileanya, Aghụghọ, na Nlanarị na Jonestown. New York: Free Press.
Shupe, Anson, David Bromley, na Edward Breschel. 1989. "Peopleslọ ndị Peoples, Apocalypse na Jonestown, na Anti-Cult Movement." Pp. 153-71 na Mgbanwe Okpukpe Ọhụrụ, Mgbu Onwe Onye, na Peopleslọ Nzukọ Ndị Mmadụ: Echiche nke Ọzụzụ na Ọdachi, nke Rebecca Moore na Fielding McGehee III dezigharịrị. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Smith, Archie Jr. 2004. "Nkọwapụta nke Templelọ Nsọ Peoples na Jonestown: Mmetụta Ọchịchị Black." Pp. 47-56 n'ime Templelọ ndị mmadụ na okpukpe ojii na America, nke Rebecca Moore, Anthony B. Pinn, na Mary Sawyer dere. Bloomington: Mahadum Indiana University.
Stephenson, Denice, ed. 2005. Ndị m hụrụ n'anya: Icheta Jonestown. San Francisco na Berkeley: California Historical Society Press na Heyday Akwụkwọ.
Kọmitii US na Ofesi. 1979. "Mgbu mmadu nke onye nnọchi anya Leo J. Ryan na Jonestown, Guyana Tragedy." US House of Representatives, 96th Congress, Oge Ikpeazụ. Washington, DC: Ọfịs Mbipụta Ọchịchị.
“Ọ Bụ igbu ọchụ ka ọ bụ igbu onwe onye?” 2006. Nkwupụta Jonestown 8. Nweta site na http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=31981 na 7 November 2014.
Wessinger, Catherine. 2000. Olee otu Narị Afọ Iri ahụ Si Abịa n'ike. New York: Mpaghara asaa.
Echiche ndị ọzọ nke ụlọ nsọ Jonestown na Peoples bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ dijitalụ nke akwụkwọ ọgụgụ isi, akụkọ onye mbụ, na nyocha nke ndị ọkachamara. Ugbu a ọ na-enye ndụ ntanetị karịrị 925 ọdịyo nke otu ahụ mere n'ime afọ iri abụọ na ise ya, yana foto ndị otu ahụ mere. Ihe dị ka 500 etere dị ugbu a na ntanetị, yana ederede na nchịkọta. Ntọala na 1998 na Mahadum North Dakota iji daba na ncheta nke iri abụọ nke ọnwụ na Jonestown, website kwagara San Diego State University na 1999, ebe e debere ya kemgbe. SDSU Library na Pụrụ iche Colleges ugbu a na-ejikwa Ntụle ndị ọzọ, otu n’ime ebe ndebe ihe ntanetị kacha ọhụrụ nke okpukpe ọhụrụ dị adị. Ebe ahụ na-echeta ndị nwụrụ n’ọdachi ahụ; na-edekọ ọtụtụ nchọpụta gọọmentị na Peoples Temple na Jonestown (dịka ihe karịrị peeji 70,000 site na FBI, gụnyere ndekọ sitere na nyocha ya yana nchịkọta akwụkwọ nke Templelọ Nsọ, na 5,000 si Ngalaba Ọchịchị US); ma na-ewetara ndị mmadụ Templelọ Nsọ na ndị otu ya n'okwu nke aka ha site na ederede, teepu, leta, foto na ihe ndị ọzọ. Ebe ahụ na-ezigakwa akụkọ na-aga n'ihu banyere nyocha na ihe omume metụtara otu ahụ.
Bibliography na Audiotape Resources:
Enwere ike ịchọta ihe ndekọ ederede nke ihe onwunwe na Peoples Temple na Jonestown Ebe a.
Audiotapes natara na Jonestown, nke 300 n'ime ha na-asọgharị na-adị ndụ, enwere ike ịchọta ebe a: http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=27280
Ihe E zoro aka na profaịlụ: Ihe ndị na-esonụ, nke a kpọtụrụ aha na isiokwu dị n'elu, nwere ike ịchọta na Ntụle ndị ọzọ website.
Mgbazinye aka binyere aka na gọọmentị nke Guyana na Templelọ ndị mmadụ, Febụwarị 25, 1976. http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=13131.
Akwụkwọ nkwado nke Tim Stoen bịanyere aka na-ekwu na Jim Jones bụ nna John Victor Stoen, February 6, 1972. http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=13836
Ntughari na ntaneti okwu nke Tape Q 042 (nke a na-akpọ Ọnọdụ Ọnwụ), emere na Nọvemba 18, 1978. http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=29084.
Ederede nke "Akwụkwọ Ozi Egburu." http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=14111
Ederede nke "Ogbe nke Asatọ." http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=14075.
Mmelite: 9 Mee 2021